Microsoft Inowedzera 'Sangana Izvozvi' kune Matimu asi Zvinoda Kuenda Nhanho Imwe Kuenderera Mberi
Muri pano: musha / System Admin / Windows / Microsoft Inowedzera 'Sangana Izvozvi' kune Matimu asi Zvinoda Kuenda Nhanho Imwe Kuenderera Mberi
Imwe yemabhenefiti emaTimu ndeyekuti chikuva chinopa mhinduro yakasimba yekubata mafoni emisangano uye kubatana. Asi mukati megore rapfuura, iko kunyorera kwave kungove wechipiri-kirasi mugari kune imwe, asi inozivikanwa mamiriro, misangano yekuzvimirira.
Uine maTeam nhasi, kana iwe uchida kuronga musangano, iwe enda kune iyo kalendari tebhu, tinya 'Musangano Mutsva', pedzisa zita, vanopinda, nguva, zuva, chiteshi, nzvimbo, uye musangano ruzivo zvikamu, uyezve kupururudza kukoka. . Asi iro ibasa rakawandisa risingadiwe kana iwe uchida kukurumidza kusvetukira kunhare nevanhu mukati (nekunze) sangano rako.
Kutanga mwedzi uno, Microsoft ichawedzera 'Sangana izvozvi' (MC237392) bhatani kumaTimu ayo anoderedza huwandu hwenhanho dzinodiwa kuti uwane mukana kune izvo zvaunoda chaizvo, chinongedzo chinogona kugovaniswa kujoina chikamu.
Mufananidzo # 1 Wedzera
Sangana Izvozvi sarudzo inouya kuTimu - Image Chikwereti, Microsoft
Ichi chinhu chinonyanya kusarudzika chinofanirwa kunge chakasvika nguva yadarika asi kunonoka kuri nani pane kusati kwamboitika Ini ndashandisa zvakachipa workaround, sekuronga misangano ndega ini kuti ndiwane kujoina zvinongedzo, asi iyi mhinduro iri nani uye inhanho imwe chete kubva pakuenzanisa mamwe maapplication seGoTo Musangano.
Nhanho inotevera inonzwisisika ndeyeMicrosoft yekupa ma URL asina maturo anogona kushandiswazve pamisangano yakawanda. Semuenzaniso, GoTo Musangano inokutendera kuti ushandise zvakare chinongedzo chakadai seGotomeeting.com/BradSamsMeeting yemusangano chero upi zvawo unobuda kana sechibatiso chekupusha kuti mumwe munhu ajoine runhare nekukurumidza. Ichi chiitiko cheMicrosoft chinofanira kufunga nezvekushandisa asi netariro kwete kuseri kweimwe rezinesi.
Iyi ndiyo imwe nhanho iyo Microsoft inofanirwa kutora kuti ienzane pamwe nemamwe maindasitiri mhinduro asi Sangana Izvozvi inhanho huru pamberi pezvinoitwa nhasi. Nayo zvine hunyanzvi kuve pakati paFebruary izvozvi, tinotarisira, inofanirwa kusvika kune edu maroja nekukurumidza, kwete kupfuura gare gare.
The post Microsoft Inowedzera 'Sangana Izvozvi' kune Matimu asi Zvinoda Kuenda Nhanho Imwe Kuenderera Mberi yakatanga kutanga Petri.
Unogona kudzivisa vanhu kubva kushandisa mamikisi paMicrosoft Matimu, uye pano sei.
Nzira yekuwana Nhamba Yenhamba Yisina Mune muIndia